Ny mari-pamantarana lehibe an'ny Analytics amin'ny fidirana amin'ny marketing | Martech Zone
Alakamisy, Desambra 24, 2015 Alakamisy, Desambra 24, 2015 Douglas Karr
Na ireo orinasa lehibe indrindra aza dia miady amin'ny metatra fanarahana. Nandritra ny folo taona mahery no nilazako izany Analytics matetika dia mamokatra fanontaniana betsaka kokoa noho ny valiny satria ny mpampiasa dia mizara, manivana ary mamakafaka ny fifamoivoizana. Atambaro izany fa mihoatra ny antsasaky ny anao rehetra Analytics ny fifamoivoizana dia mety hateraky ny bot, ary tena ilaozanao ny lohanao matetika.
Mojo Media Labs dia namokatra ity sary ity, Ny torolàlana ho an'ny Data & Analytics ho an'ny Marketer ao anaty. Manome ambaratongam-pitsangatsanganana ary koa torolàlana isaky ny metrika manan-danja amin'ny varotra miditra ary koa isaky ny impiry hanamarinana ny metrika tsirairay.
Daily - misy ny fitsidihana, fitarihana, mpanjifa, mpitsidika hitarika tahan'ny fiovam-po, fandrosoana mandavantaona, mitarika ny tahan'ny fiovam-pon'ny mpanjifa, ary ny fari-pahalalana ho an'ny tsirairay.
In-2 hatramin'ny in-3 isan-kerinandro - manara-maso ny loharanom-pifamoivoizana, ny fitsidihan'ny loharanom-pifamoivoizana, ny tahan'ny fitarika ary ny fiovam-po amin'ny loharanom-pahalalana ary koa ny fanovana isan-taona sy ny fampitahana ny benchmark.
In-2 hatramin'ny in-telo isam-bolana - avereno jerena ny angona granular ao anatin'ny loharanom-pifamoivoizana, ny toetoetra sy ny fitondran-tena ary ny fandrosoana isan-taona miaraka amin'ny fampitahana benchmark.
In-1 hatramin'ny in-telo isam-bolana - avereno jerena ny teny fanalahidy, pejy fandraisana, metatra mailaka, fampisehoana fiantsoana andraikitra, mpanaraka ara-tsosialy, tiana ara-tsosialy ary fizarana, bilaogy Analytics, ary rohy miditra, ary fanatsarana ny fikarohana.
Torohevitra iray mety hanampy anao ny miasa mihemotra. Misokatra matetika ny orinasa Analytics ary atombohy amin'ny hoe iza no mitsidika ny pejy fandraisana. Aleo misokatra Analytics ary jereo ny fiovam-ponao, avy eo ny fantsom-pivadibadikao, ary miverena mankany amin'ny pejy sy ny referraly. Izany dia hanampy anao hifantoka amin'ireo metrika manan-danja izay mitondra fiara fa tsy afangaro amin'ny fandrefesana izay mety tsy maninona.
Tags: Analyticsbenchmarks analyticsAttributionanalytics amin'ny bilaogyfampisehoana antso-to-hetsikataham-panovanafampisehoana ctaCustomerscyear mandritra ny taonametatra mailakarohy mankany anatymari-pamantarana lehibeteny fanalahidyfiantsonana pejymitarika-to-mpanjifaLeadsmari-pandrefesanafanarahana sosialyfitiavana ara-tsosialyfizarana sosialyloharanom-pifamoivoizanafitondran-tenan'ny mpitsidikanitsidika-to-mitarikamitsidikafitsidihan'ny loharanom-pifamoivoizana
Ptengine: Sarintany hafanana, fampielezan-kevitra, fanaraha-maso ny fiovam-po ary ny analytics